Daalibaan oo sheegatay mas’uuliyadda Qaraxyo Mataana ah oo lala eegtay xarun Milatari Waqooyi galbeed dalka Pakistan. – SBC
Daalibaan oo sheegatay mas’uuliyadda Qaraxyo Mataana ah oo lala eegtay xarun Milatari Waqooyi galbeed dalka Pakistan.
dhaqdhaqaaqa Daalibaan ee ka soo horjeeda joogitaanka ciidamada shisheeye dalka Afghanistan iyo xukuumadda uu madaxda ka yahay madaxweyne Karazaay ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxyo mataana ah oo lala eegtay xarun machad Milatari oo ku taala Waqooyi galbeed Pakistan in ka abadan 80 qof,iyadoona tobanaan kale ay ku dhaawacmeen.
Afhayeen u hadlay daalibaan oo lagu magacaabo Ixsaanullah Ixsaan ayaa sheegay in qaraxyadaas ay ahaayeen fariin ay u dirayaan xukuumadda Pakistan oo uu sheegay in ay gacan ka geysatay dilkii hogaamiyihii ururka Alqaacidda Osam Bin Laden.
Inta badan dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay qaraxyada ayaa ku jiray gudaha xarunta tababarka Shabqadar oo ka tirsan Degmada Charsadda,waxaana loo malaynayaa in ay fuliyeen qaraxyadaasi Labo qof oo isa soo miidaamiyay.
Qaraxyada ayaa lagu aadiyay xili ay basaska fuulayeen Ciidamada tababarka ku jiray oo fasax yar kahelay xiliga tababarka.,waxaana xili ay ku jireen fuulitaanka gawaarida laga maqlay gudaha xerada qaraxyo dhawaqoodu aad u xoogan yahay.
Waa dhacdadii ugu dhiig daadinta badnayd,tan iyo wixii ka dambeeyay sheegashada Dowlada Maraykanka ee dilka Hogaamiyihii Al qacida Sheekh Usama Bin ladin.
Dowlada Maraykanka waxaa ay gudaha Pakistan,gaar ahaan deegaanka Abbottabad 2-dii Bishan May ay ku dileen hogaamiyihii shabakada Al qacida Sheekh Usama Bin ladin.